Google နဲ့ SearX: စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့စီမံကိန်း ၂ ခု Linux မှ
Google နှင့် SearX: Fuck Off: စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့စီမံကိန်း ၂ ခု
Linux Post Install လုပ်ပါ | 21/07/2021 06:00 | applications များ, အတော်ကြာ
ယခင်ဖြစ်ရပ်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကွဲပြားခြားနားသောကိစ္စရပ်ကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့သည် အင်တာနက် browser နှင့်၏ဆောင်ပုဒ် privacy နှင့်အိုင်တီလုံခြုံရေး။ ဒီနေ့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုနည်းနည်းလောက်စူးစမ်းလေ့လာပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စီမံကိန်း ၂ ခုထဲကို ၀ င်သွားတယ် "Google က Fuck Off" y SearX.
အခြေခံအားဖြင့်, "Google က Fuck Off" y SearX နီးကပ်စွာဆက်နွယ်သောစီမံကိန်း ၂ ခုရှိသည် အသုံးပြုသူများ၏ privacy ကိုလေးစားပါ.
ထို့အပြင်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လင့်ခ်များကိုချက်ချင်းချန်ထားမည် ယခင်ဆက်စပ်ရေးသားချက်များ, ဒါကြောင့်တစ်စုံတစ် ဦး က၏နယ်ပယ်သို့စူးစမ်းရန်ဆန္ဒရှိသောဖြစ်ရပ်အတွက် အင်တာနက် browser နှင့် privacy နှင့်အိုင်တီလုံခြုံရေး အလွယ်တကူလုပ်နိုင်တယ်
"အင်တာနက်သုံးစွဲသူအများစုသည်၎င်းတို့ရှာဖွေရန်လိုအပ်သည့်အရာများနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြံဥာဏ်ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေ၎င်းသည်သွားလာရန်အတွက်အင်တာနက်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုအသုံးပြုကြသည်။ အင်တာနက်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်အခြေခံအားဖြင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ဟုခေါ်သော application တစ်ခုကိုကမ်းလှမ်းသော ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုသူများကိုသန်းပေါင်းများစွာသောအင်တာနက် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များ၊ မည်သည့်ဒေတာ (စကားလုံး / စကားစု / အယူအဆ / မေးခွန်း) ကိုမဆိုရလဒ်အနေဖြင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပေးသည်။ ပေးထားသောရှာဖွေမှုစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီသောမတူညီသောဝဘ်စာမျက်နှာများကိုလင့်ခ်များဖြင့်စာရင်းပြုစုပါ။" အင်တာနက်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်: ၂.၀၁၉ အတွက်အကောင်းဆုံး
အင်တာနက်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်: ၂.၀၁၉ အတွက်အကောင်းဆုံး
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် Google ရှာဖွေမှု - အနိုင်ရ! 10 ၏အကောင်းဆုံးရှာဖွေရေးအင်ဂျင် 2019
ကွန်ပျူတာလုံခြုံရေးနှင့်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ - ကျွန်ုပ်တို့၏လုံခြုံရေးကိုတိုးတက်စေခြင်း
PrivacyTools - အွန်လိုင်း privacy အတွက်တန်ဖိုးရှိသောအသုံးဝင်သော ၀ ဘ်ဆိုဒ်
1 ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကိုလေးစားသည့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်နှင့် metasearch အင်ဂျင် Google နှင့် SearX
1.1 Google Fuck Off ကဘာလဲ။
1.2 SearX ဆိုတာဘာလဲ။
1.3 Google Fuck Off တွင် SearX အသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကိုလေးစားသည့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်နှင့် metasearch အင်ဂျင် Google နှင့် SearX
Google Fuck Off ကဘာလဲ။
အဆိုပါအညီ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် ၏ဤစီမံကိန်း၏ အင်တာနက်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၎င်းကိုသတ်မှတ်သည် -
"ကျွန်ုပ်တို့သည်အင်တာနက်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ဖြစ်ပြီး၊ အခြားသူများမှဂူဂဲလ်၊ Yahoo၊ Bing စသည့်အခြားသူများထံမှရှာဖွေမှုရလဒ်များကို (proxy မှတစ်ဆင့်) ရရှိသည်။ အသုံးပြုသူများသည်မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသို့မဟုတ်အပြုအမူဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုဤကုမ္ပဏီများအားထုတ်ဖေါ်ခြင်းမပြုရန်သေချာစေရန်။
ထို့ကြောင့်သူတို့၏ရလာဒ်များသည်“ ကြားနေ” ဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်အသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းစီ၏အွန်လိုင်းပရိုဖိုင်း၏လွှမ်းမိုးမှုကိုမခံရ။ သို့မဟုတ်အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုမှာအသုံးပြုသူများသည်နဖူးစည်းစာတန်းများကြော်ငြာများကိုရှာဖွေရာတွင် "bubble bubble" မှရှောင်ရှားကြသည်။ သူတို့နောက်မှနှိပ်ရန်အလွန်များပြားသောကြော်ငြာများ။
ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကို Kreuzberg (ဘာလင်) မှနေထိုင်သူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရပ်ကွက်အတွင်းမှ Google Campus နှင့် Google (နှင့်၎င်း၏ကမ္ဘာ) မှကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝများမှမောင်းထုတ်ရန်အတူတကွလုပ်ဆောင်နေသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူစုများမှသင့်အားဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ ငါတို့နဲ့လာပူးပေါင်းပါ! ကျွန်ုပ်တို့၏ဆာဗာသည်သင်၏သီးသန့်တည်ရှိမှုကိုလေးစားရန်ကြိုးပမ်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မှတ်တမ်းများကိုသိမ်းဆည်းထားခြင်းမရှိပါ။"
ထို့အပြင်၎င်းကိုသတိပြုသင့်သည် "Google က Fuck Off" အသုံးပြုသည် SearX အသုံးပြုသူများ၏ privacy ကိုလေးစားပြီးသင်၏ရှာဖွေခြင်းနှင့်ရှာဖွေခြင်းရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်။
အဆိုပါအညီ GitHub ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် ၏ဤစီမံကိန်း၏ အင်တာနက် metasearch ကိုခေါ် «SearX»၎င်းကိုသတ်မှတ်သည် -
"ရှာဖွေမှု ၀ န်ဆောင်မှု ၇၀ ကျော်မှရလဒ်များကိုစုစည်းပေးသောအခမဲ့အင်တာနက် metasearch engine ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူများကိုခြေရာခံသို့မဟုတ် profiled ကြသည်မဟုတ်ရှိရာတစ်ခု။ ထို့အပြင် Searx ကို Tor မှတစ်ဆင့် online anonymity ကိုထိန်းသိမ်းရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။"
Google Fuck Off တွင် SearX အသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ
ဂူဂဲလ်နှင့်အခြားရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များအတွင်းရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံ၍ မဟုတ်သောသဘာဝရှာဖွေမှုများကိုပြုလုပ်ပါ။
တစုံတရာသို့မဟုတ်အရာအားလုံးကိုတတိယပါတီများနှင့်မျှဝေနိုင်သည့်အန္တရာယ်မရှိဘဲသတင်းအချက်အလက်ကိုရှာဖွေခြင်း၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ privacy နှင့်ကွန်ပျူတာလုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်။
အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ဆော့ဝဲလ်ကိုသုံးပါ၊ ၎င်းသည် ၁၀၀% ပွင့်လင်းသည်။ ငါတို့ရဲ့ privacy နဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်လွတ်လပ်မှုကိုအပြုသဘောသက်ရောက်မှုရှိတယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့်ကွတ်ကီးများအသုံးပြုခြင်းကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲရှာဖွေပါ။ ထို့အပြင်သင်၏ဆက်သွယ်မှုများအားလုံးကိုလုံခြုံပြီးစာဝှက် (HTTPS / SSL) ပြုလုပ်သည်။
လောလောဆယ်သူသည်မိမိအဘို့အသွားနေသည် 1.0.0 ဗားရှင်း။ ဤလက်ရှိဗားရှင်း၊ ၎င်း၏ယခင်နှင့်အနာဂတ်ဗားရှင်းများကိုအောက်ပါလင့်ခ်မှရှာဖွေလေ့လာနိုင်သည် GitHub။ ပြီးတော့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေအတွက် ဒေသတွင်းတပ်ဆင်မှု (ကိုယ်ပိုင်လက်ခံမှု) ဤစီမံကိန်း၏သင်သည်သင်၏အောက်ပါ link ကိုစူးစမ်းလေ့လာနိုင်ပါတယ် စာရွက်စာတမ်းများ.
တိုတိုပြောရရင် "Google Fuck Off" နှင့် "SearX" သူတို့က2ဖြစ်ကြသည် သုံးစွဲသူများ၏ privacy ကိုလေးစားသောစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအရေးကြီးသောစီမံကိန်းများ" များစွာသောအရာတို့ကိုအကြားကတည်းက အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနှင့်ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်နှင့်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေကြသည် ပရိုဖိုင်းနှင့်ခြေရာခံရှောင်ကြဉ်ပါ သူတို့ကိုမှတဆင့်ရှာဖွေသူကိုအသုံးပြုသူများသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Google နှင့် SearX: Fuck Off: စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့စီမံကိန်း ၂ ခု
Artificial Intelligence: လူသိအများဆုံးနှင့်အများဆုံးအသုံးပြုသောပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် AI
Clapper - တုံ့ပြန်မှုရှိတဲ့ GUI ပါတဲ့ GNOME media player